K-Tek မှ KlassicPro Boom Poles များထုတ်ဖော်ပြသ NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » K-Tek မိတ်ဆက် KlassicPro Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှ
K-Tek မိတ်ဆက် KlassicPro Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှ
K-Tek, ပထမဦးဆုံးမိတ်ဆက်သောကုမ္ပဏီ လုပ်-In-USA သို့, ဖိုက်, တယ်လီစကုပ်တိုင် 25 လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသူတို့၏ဆုရ Klassic Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှအဓိကတိုးတက်လာကြေငြာလိုက်သည်။ ပေါ့ပါးက high-သိပ်သည်းဆဖိုက် Tube, modular အခြေစိုက်စခန်းများ, အမြန်-lock နှင့်တိတ်ဆိတ်ကိုင်တွယ်: ဒီနေ့ရဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စန်းအော်ပရေတာများ၏တောင်းဆိုချက်များနှင့်အတူတက်ထားရန်, သစ်ကို KlassicPro မူရင်းအပါအဝင်အကောင်းဆုံး features တွေထည့်သွင်း။ သို့တိုင် Vista, California မှာမူရင်းဆိုင် built-in တစ်ခုစီ KlassicPro မူရင်းအဖြစ်အသေးစိတ်ဖို့အတူတူစောင့်ရှောက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အတူထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
အသစ်ဒီဇိုင်းကိုတိုးချဲ့ Interchange ပေးထားပါတယ်။ K-Tek ရဲ့အသစ်ဖြုတ် headpiece လာဘယ်မှာကြောင်းပါပဲ။ Gone အတိတ်၏ရှိတာပါနှင့်တံဆိပ်ခတ်ထမ်းဘိုးဖြစ်ကြသည်။ ယနေ့ဒီဇိုင်း headpiece ရိုးရှင်းစွာချောချောမွေ့မွေ့အပေါ် threads နှင့်ပြွန်ကိုချွတ်။ ရှေးခယျြမှု၏ cable ကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ် installed-မပါဘဲဂဟေနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါစန်းတိုင်အလွယ်တကူ un-cabled, ကွိုင် cabled, ဖြောင့် cabled သို့မဟုတ်ထိပ်မှာ transmitter ကိုသို့မဟုတ်အောက်ခြေနှင့်အတူဖို့အသွင်ပြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပိုပြီးအချိန်ကုန်အသွင်ပြောင်း့ cabling ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့လုံးဝစနစ်သစ်ဝယ်ယူရန်မလိုအပ်မျှရှိနေပါသည်။
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ headpiece လယ်ကွင်းမှုကြီးကိုလက်တွေ့ကျတဲ့စေသည်။ ဒီထောကျပံ့ဖို့, K-Tek တစ်ဦးအမှတ်တံဆိပ်အသစ်ကနိမ့်ပရိုဖိုင်းကိုညာဘက်ထောင့် connector ကို featuring အရည်အသွေးမြင့်မားကွိုင် cable ကိုဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ အသစ် KlassicPro Cable ကိုကအားကောင်းနှင့်ရေဒီယိုကြိမ်နှုန်း (RF) ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းမှ Ultra-protected နှစ်ဦးစလုံးလုပ်ထူ gauge ဝါယာကြိုးများနှင့်လူမီနီယံဒိုင်းကာထည့်သွင်း။ အသစ် KlassicPro ညာဘက်ထောင့် connector ကိုသေးငယ်ပေါ့ပါး, ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်လူကြိုက်များနှင့်ဖွဲ့ဖြစ်ပါသည် Neutrik ၎င်း၏အခြေစိုက်စခန်းအဖြစ် connector ကို။ လုံလုံခြုံခြုံအရပ်ဌာန၌ဝါယာကြိုးကိုင်ထားစဉ်အသစ်အစိုင်အခဲ strain ကယ်ဆယ်ရေးမှန်ကန်စွာရွေးချယ် Angle connector ကိုသိသိသာသာအားကောင်းစေသည်။ တစ်ဦးကဆက်ပြောသည်အကျိုးရှိသကဲ့သို့, connector ကိုတိမ်းညွတ်ရိုးရှင်းစွာနှစ်ခု screw နှစ်ခုဖယ်ရှားလိုချင်သောအနေအထားကလှည့်, မြားနှငျ့အရပျ၌ကပြန်သော့ခတ်ခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားတိုးတက်မှုအပေါငျးတို့သတိုင်ထိပ်ပေါ်မှာအများကြီး-တပ်မက်လိုချင်သောအပေါ့ပါးဝန်အထိထည့်ပါ။
K-Tek ပိုပြီးတင်းကျပ်ဖြစ်ကြပြီးဒီနေ့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပိုမိုနှစ်သက်ကြောင်းတိုပြိုကျအရှည်ရှိသည်သောထမ်းဘိုးကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ KlassicPro ရဲ့ပြွန်၏မူလအလင်းအလေးချိန်ထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သော်လည်း, သစ်ကိုဒီဇိုင်း features တွေအစွမ်းသတ္တိကိုကဆက်ပြောသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးဆဋ္ဌမအပိုင်းများနှင့်ကျယ်ပြန့်ပြွန်ထည့်သွင်းပုတောင့်တင်းတိုးပွါးနှင့်မှန်သောချိန်ခွင်ကိုင်တွယ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေ။ အဆိုပါရလဒ်မြန်ဆန် cuing နှင့်မိုက်ခရိုဖုန်းကိုပိုပြီးအသုံးပြုသူထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်အသစ်သောအကျိုးအတွက်သော့ခတ်ကော်လာတစ်ဦးအပြောင်းအလဲဖြစ်ပါတယ်။ အစဉ်အလာကတော့ K-Tek သုံ့ပန်း collett တစ်ဦးထူသေးချောမွေ့မျက်နှာပြင်တစ်ဦးချင်းစီအပိုင်းကိုပိုပြီးသိမ်မွေ့တဖြည်းဖြည်းတိုးချဲ့ခွင့်ပြုတွေနဲ့ပြုပြင်မွမ်းမံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုကော်လာဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်သည့်အခါဘဲဥပုံ divets ဖို့အပြင်ပန်းချိုပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်အတူပေါင်းစပ်အသစ် anodizing ဖြစ်စဉ်ကိုပိုကောင်းတဲ့ချုပ်ကိုင်နှင့်ချောမွေ့ခံစားပေးသည်။ ပြွန်များအကြားအဆိုပါ finish ကိုလည်း KlassicPro sleekly ပွင့်လင်း glides ဒါပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အပိတ်ခံခဲ့ရသည်။
နယူး KlassicPro ထမ်းဘိုးကိုလက် burnished ဆူညံသံကိုင်တွယ် diffuse မှဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ဟာ4ခြောက်အပိုင်းမော်ဒယ်တစ်ဦးရွေးချယ်မှုအတွက်လာ:9'(KP9), 12' (KP12), 16 '(KP16), နှင့် 20' (KP20), အလျားတိုးချဲ့။ ကွိုင် Cable ကိုလမျးဖွောငျ့ Cable ကိုပစ္စည်းများသီးခြားစီဝယ်ယူခြင်းသို့မဟုတ် Pre-configured စန်းတိုင်အထုပ်ထဲမှာနိုင်ပါသည်။ အောက်ခြေညာထောင့် XLR အခြေစိုက်စခန်း (KPCCR), Flow-မှတဆင့်အခြေစိုက်စခန်း (KPFT) နှင့်လူကြိုက်များ ဘေးထွက် Kicktransmitter adapter (KPTA) လည်းတိုးတက်လာသောဖြစ်ပါတယ်။
K-Tek KlassicPro Boom ရိုးစွန်းဒေသများမှခွင့် K-Tek ကုန်သည်တွေကနေရရှိနိုင်ပါသည်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကအီးမေးလ် [အီးမေးလျ protected] အလည်အပတ် www.ktekpro.com
က Manfred N ကို Klemme အားဖြင့် 1996 အတွက်တည်ထောင်သူရဲ့ကတည်းက K-Tek အသံအင်ဂျင်နီယာနှင့်စန်းအော်ပရေတာရဲ့အလုပ်အကိုင်အခွင့်အချောမွေ့စေရန်ဆန်းသစ်ရေးကိရိယာများနှင့်အတူအသံကမ္ဘာကြီးကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ အသံများအတွက်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်အတူ Manfred ရဲ့ပထမဆုံးမစ်ရှင်အမေရိကန်တစ်လိုင်းကိုဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပေါ့ပါးခိုင်ခံ့နှင့်ရှေးရှေးအသိပေးစာကိုယူကြောင်းဖော်ရွေဒီတော့အသံဖြစ်ကြောင်းစန်းထမ်းဘိုးတို့ကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြည့်စုံ-in ကို 1999 K-Tek မစ်ရှင်ဟာ Klassic Boom ဝင်ရိုးစွန်းများအတွက် Motion Picture ဝိဇ္ဇာနှင့်သိပ္ပံအကယ်ဒမီကနေနည်းပညာဆိုင်ရာအောင်မြင်မှုဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထိုအချိန်မှစ. K-Tek များစွာသောအခြားဆုရရှိထားပြီးပါပြီနှင့်အပါအဝင်လှပသောဒီဇိုင်းနှင့်လှလှပပဆောက်လုပ်ထား, အသံ-ဗဟိုပြုထုတ်ကုန်အောင်၏ဂုဏ်သတင်း: Avalon ဖိုက်နှင့်လူမီနီယံစန်းထမ်းဘိုး, ထိတ်လန့်တောင်ပေါ်, ငါးမန်းအင်တင်နာတောင်ပေါ်မှာများနှင့်မပီမသ & Topper windscreens ။ K-Tek ရဲ့ကြီးထွားလာ Stingray လိုင်းအသံရောနှောအိတ်, ခါးလောက်ခါးပတ်, တစ်ဦးကိုပြန်လည်-saving အသံကကြိုးတန်ဆာဆင်ပေါင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းအိတ်နှင့် Pouch ပါဝင်သည်။ သွားရောက်ကြည့်ရှု: www.ktekpro.com.
Lewis ကဆက်သွယ်ရေးများကပြင်ဆင်ပြန်ကြားရေး: [အီးမေးလျ protected]
BB&S အလင်းများ Quarantine တိုတို - ကျွန်ုပ်တို့မသွားနိုင်ပါ - စက်တင်ဘာလ 24, 2020
Teradek ၏ Bolt အသစ် 4K LT: 4K HDR မှစျေးသက်သာစွာဖြင့်သွားနိုင်သောလမ်းပေါ်တွင်စောင့်ကြည့်ခြင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာ - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
Lindsey Optics Intro ၏ပထမဆုံး FSND Rota-Grad Filters များ - စက်တင်ဘာလ 15, 2020
လှံ & Arrows ဗီဒီယိုကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ် 2019-07-09
ယခင်: IBC 2019 တွင်ပါဝင်သောထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် SMARTLIVE MULTI SPORT ၏ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံနှင့်ဗားရှင်းစက်ရုံအဆင့်မြှင့်တင်မှုစတင်ရန် Tedial
နောက်တစ်ခု: ဗိုလ်မှူးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအားကစားပိုင်ရှင်များနှင့်စီစဉ် Aso content တွေကိုဝေမျှဘို့ Globecast ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာ Hub သုံးစွဲဖို့ Multi-တစ်နှစ်သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ထိုး